Shacab is hor-taagay gaari ay wateen Ciidamada AMISOM oo nin waayeel ah ku jiiray Isgoyska KM4 - iftineducation.com
iftineducation.com – Shacab careysan ayaa maanta duhurkii is hor-taagay gaari ay la socdeen Ciidamada AMISOM oo nin waayeel ah ku jiiray Isgoyska KM4.
Gaariga ay la socdeen Ciidamada AMISOM oo ahaa kuwa qafilan ayaa si xowli ah ku socday, waxaana mar uu marayay agagaarka Aargada uu jiiray nin waayeel ah.
Ninka waayeelka ah ayaa la sheegay inuu ka jiiray lugaha, isla markaana mid ka mid ah lugtiisa ay bur burtay, waxaana markii falkaas dhacay soo buuxiyay goobta dadweyne fara badan.
Gaariga falkan sameeyay ayaa damcay inuu goobta ka dhaqaaqo, balse dadweynihii ku sugnaa agagaarka Isgoyska KM4 ayaa inta ay gacmaha is qabsadeen hor-joogsaday gaariga.
Intaas kadib ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa waxay gacan siiyeen shacabkii hor-joogsaday Ciidamada, waxaana ay ka dalbadeen inay ninka waayeelka ee dhaawaca ah qaadaan, hadii kale aysan goobta ka dhaqaaqeyn.
Gaarigii ay wateen Ciidamada AMISOM oo ay shacabka is hor-taageen markii uu jiiray nin waayeel ahaa
Qof goob jooge ah ayaa sheegay in dadweynihii ku sugnaa agagaarka Isgoyska KM4 ay si geesinimo leh ay isu hor-taageen gaariga, kuna qasbay inay soo degaan ciidamada, waxaana markii dambe ay goobta ka qaadeen ninkii waayeelka ahaa oo dhaawac culus ahaa.
Gaadiidka qafilan ee Ciidamada AMISOM ayaa wadooyinka qaar ku jiira dadka rayidka ah, waxaana ay geystaan shilal dhimasho iyo dhaawac ah, iyadoo mararka qaar dhacda inay socodkooda iska sii wataan, marka ay qof muwaadin ah jiiraan.
Eriterian ku Nool Somalia Kuna Dhashay oo Codsaday in Xubno laga siiyo Dawlada Federalka Somaliya iyo Maamulka cusub ee Hiiran